Igwe ọkụ ọkụ YZU
Agụụ generator bụ ọhụrụ, oru oma, dị ọcha, echekwa na obere agụụ akụrụngwa na-eji nti nsogbu ikuku iyi ka n'ịwa nsogbu, nke na-eme ka ọ dị nnọọ mfe na-adaba adaba iji nweta nsogbu na-adịghị mma ebe enwere ikuku ikuku ma ọ bụ ebe ma nrụgide dị mma ma na-adịghị mma mkpa na a pneumatic usoro. Agụụ generators na-ọtụtụ-eji ulo oru akpaaka, dị ka ígwè, ngwá electronic, nkwakọ, obibi, plastik na robotik.
Agụụ ihe nzacha na-anakọta pollutants (tumadi ájá) ewepụtara na ikuku iji gbochie usoro mmetọ na-eji n'etiti mmiri iko na agụụ generator (ma ọ bụ agụụ valvụ). Mufflers ga-arụnyere na iyuzucha n'ọdụ ụgbọ mmiri nke agụụ generator, mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri (ma ọ bụ iyuzucha n'ọdụ ụgbọ mmiri) nke agụụ valvụ na iyuzucha n'ọdụ ụgbọ mmiri nke agụụ mgbapụta.
Agụụ Chuck YZP
Agụụ ọkpọ, makwaara dị ka agụụ spreader, bụ otu n'ime agụụ akụrụngwa actuators. Na mkpokọta, iji mmịpụta agụụ iko iko ngwaahịa bụ usoro dị ọnụ ala karịa. Enwere ike ịmịnye ndị na-a Rubụ rubber na oke okpomọkụ. Ndị na-a Silụ sịlịlịkọn dị mma maka ngwaahịa na oke mmiri. Na mgbakwunye, na mmepụta ahụ n'ezie, ọ bụrụ na achọrọ iko mmiri ka ọ bụrụ ihe na-eguzogide mmanụ, enwere ike ịtụle ya iji ihe ndị dị ka polyurethane, nitrile butadiene roba, ma ọ bụ polymers nwere vinyl iji mee iko mmiri ahụ. zere elu nke ngwaahịa a kpụchara akpụcha, nhọrọ kachasị mma bụ nke nitrile roba ma ọ bụ roba silicone nke nwere ihe mkpuchi iko nke nitrile roba, nwere ike ịka akwa karị, ya mere a na-ejikarị ya arụ ọrụ dị iche iche agụụ.
Njikwa Pneumatic na ihe ndị dị mkpa, otu ụzọ na-achịkwa ihe nchịkwa. A na-ahazikarị n'etiti cylinder na valvụ na-agbanwe agbanwe, nke mere na ikuku dị na cylinder anaghị agafe valvụ na-agbanwe agbanwe na valvụ ahụ kwụsịrị ozugbo.
Plastic ikpu yinye dị ka aha ya na-atụ aro bụ ụdị nke ikpuru yinye. Dị ka ihe owuwu ahụ nwere ike kere n'ime akwa plastic ikpuru yinye na n'ụzọ zuru ezu mechiri emechi plastic ikpu yinye; Dị ka ihe nlereanya, ọ nwere ike kere n'ime obere yinye, n'ozuzu yinye na nnukwu Dị ka ụdị nwere ike kewaa nkịtị ikpu yinye, yiri ikpuru yinye, S-ụdị ikpuru yinye; Dị ka akụrụngwa na-ekewa n'ime plastic mbụ ngwugwu na recycled plastic, wdg
A na-akpọkwa sịlịnda a na-etinye ya na gas nke mmiri gas
A na-ejikọta cylinder nsogbu na uru nke cylinder na cylinder na imeziwanye imewe, mmanụ hydraulic na ikewapụ iche, ikuku jikọtara na kọntaktị piston na-arụ ọrụ mgbe mpempe ọrụ na-arụ ọrụ mbido, ọsọ ọsọ, nkwụsi ike, na ngwaọrụ ngọngọ nke ikuku. , mmezi mmezi dị mfe, nwere ike nweta ike dị elu nke igwe hydraulic n'otu ọnọdụ ahụ, obere ike ike, ọdịda dị nro adịghị emebi ebu, ọ dị mfe ịwụnye ma wụnye mgbatị pụrụ iche nwere ike ịbụ ogo 360 n'akụkụ ọ bụla, ohere a na-etinye obere, obere arụ ọrụ nke ịrị elu okpomọkụ, ndụ ogologo oge, obere mkpọtụ, na isi ihe ndị ọzọ.